पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको महत्वाकांक्षी योजना क्रमश: अगाडी बढ्दै छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेपछि नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका नामको बैंक स्थापनार्थ निवेदन दर्ता भएको थियो ।
हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनमा लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको बिहीबार बसेको बोर्ड बैंठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहमा ४० प्रतिशत सेयर रहेको छ । हाल संस्थापक समूहमा विभिन्न बैंक तथा बिमा कम्पनीलगायत प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारीको संलग्नता छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत लगानी गर्न अनुकूल हुने गरी बैंक स्थापनाका लागि आवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
स्व. गणेश राज शर्मा नेपालको कानुन क्षेत्रको राम्रो मान्छे लाग्छ मलाई। उहाँको एउटा भनाइ थियो- “राम्रो मान्छे पाउने गार्‍हो! कुनै मान्छे हाम्रो सोचाइको कम्तीमा ६० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी राम्रो छ भने राम्रो मान्नु पर्दछ, संगत गर्दा हुन्छ।’ यो व्यवहारोपयोगी सल्लाह हो। त्यस्तै मलाई कानुनमा ट्रेनिङ गर्ने अर्का असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो- सुशील कुमार सिन्हा। ‘कोही नराम्रो भए आफूलाई छ; त्यस्तासँग परै बस्नु पर्छ किन टाउको दुखाउने?” भन्ने उहाँको सोच थियो। http://bipinadhikari.com.np/good-people/ ... See more